2 Timote 3 - Ny Baiboly
2 Timote toko 3
Ny fandosirana ny mpampianatra tsy izy - Famporisihana an'i Timote haharitra amin'ny tsara.
1Aoka ho fantatrao fa any aoriana any, dia hisy andro sarotra; 2fa ho tia tena ny olona, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavona, mpiteny ratsy, mpanohi-dray aman-dreny, tsy mankasitraka, tsy tia vavaka, 3tsy manam-pitiavana, tsy azo havanina, mpanendrikendrika, tsy mahonon-tena, lozabe, tsy tia ny tsara fanahy, 4mpamadika, mpidaondaom-bava, mpieboebo, tia ny fahafinaretan'ny nofo mihoatra noho Andriamanitra, 5ary manana ny endriky ny fitiavam-bavaka, nefa tsy manana ny heriny: ireny koa halaviro. 6Fa anisan'izany ireo mitsofoka any an-tranon'ny sasany mambabo vehivavy adala vesaran'ny ota sy tarihin'ny filana maro, 7ary mianatra mandrakariva, nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina na oviana na oviana. 8Tahaka ny nanoheran'i Janesy sy Jambresy an'i Moizy no anoheran'ireo koa ny fahamarinana, dia olona ratsy fanahy sy melo-pinoana, 9kanefa tsy handroso intsony izy, fa hiharihary amin'ny olona rehetra tahaka ny azy roa lahy ireo koa ny hadalany.
10Fa hianao kosa efa nanaraka tsara ny fampianarako, ny fitondran-tenako, ny kendreko, ny finoako, ny fandeferako, ny fitiavako, ny faharetako, 11ny fanenjehana sy ny fahoriana nanjo ahy, toy ny tany Antiokia sy tany Ikonioma ary tany Listra; niaritra fanenjehana tokoa aho, fa nanafaka ahy hatrany ny Tompo. 12Dia hita fa izay rehetra te-ho velona araka an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesoa dia henjehina, 13fa ny ratsy fanahy sy ny mpisandoka kosa dia handroso miharatsy ihany, sady mpamitaka no fitahina.
14Ary hianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra nianaranao sy azonao antoka, fa fantatrao ilay nampianatra anao, 15sady hatry ny fony mbola zaza hianao no efa nahalala ny Soratra Masina, izay mampahendry anao ho amin'ny famonjena noho ny finoana ny Kristy Jesoa. 16Satria ny Soratra rehetra avy amin'ny fanilovan'Andriamanitra dia mahasoa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fananarana, ho fanabeazana amin'ny fahamarinana, 17mba hahalavorary ny olon'Andriamanitra sy hahavonona azy ho amin'ny asa soa rehetra. >